ब्लड ग्रुपअनुसार थाहापाउनुहोस् तपाईको स्वभाव कस्तो ? – Khabaarpati
ब्लड ग्रुपअनुसार थाहापाउनुहोस् तपाईको स्वभाव कस्तो ?
December 27, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on ब्लड ग्रुपअनुसार थाहापाउनुहोस् तपाईको स्वभाव कस्तो ?
ब्लड ग्रुपले स्वास्थ्य अवस्थाको मात्रै होइन मानिसको स्वभावको बारेमा पनि जानकारी दिन्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो । क्यानेडियन नेचुरोपेथिक डाक्टर जेम्स डी एडमाओ र उनका छोरा पिटर डी एडमाओले गरेको अध्ययन अनुसार ब्लड ग्रुपमार्फत व्यक्तिको स्वभाव बारेमा समेत जानकारी दिन सकिन्छ ।
ब्लड ग्रुपले मानिसको व्यक्तित्व, काम, रोजाई र जीवनसँग सम्बन्धित जानकारी पनि दिन्छ । जस्तै प्रत्येक व्यक्तिको व्यवहार अलग हुन्छ ठिक त्यसरी नै सबैको ब्लड ग्रुप पनि फरक फरक हुन्छ । त्यतिमात्र नभई जापानमा केटा र केटीको ब्लड ग्रुप अनुसार नै उसका लागि जीवनसाथी चयन गर्ने गरिन्छ ।कतिपय एसियाली देशहरूमा त कुनै पनि व्यक्तिको स्वभाव उसको ब्लड ग्रुपबाट नै पत्ता लगाउन सकिने मान्यता छ ।
जानौं कुन ब्लड ग्रुप भएका मानिस कस्ता ?,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
ए ग्रुप : टाइप ए ब्लड ग्रुप भएका मानिस राम्रो रोल मोडेल बन्ने गर्छन् । किनकी उसमा सफलता हासिल गर्ने क्षमता निकै बढी हुन्छ । टाइप ए ब्लड ग्रुपका मानिसले सबैलाई सँगै लिएर हिँड्न रुचाउँछन् । ए ब्लड ग्रुप भएका व्यक्तिको स्वभाव कोमल, जिम्मेवार, संवेदनशील र जीवनमा राम्रो साथी बन्ने गर्छन् । यो ब्लड ग्रुपका मानिसले आफूभन्दा पहिले अर्काको बारेमा सोच्ने गर्छन् । ए ब्लड ग्रुप भएका व्यक्ति धेरै सोच्ने हुन्छन् जसले गर्दा तनावमा पनि धेरै पर्छन ।
एबी ग्रुप : एबी ब्लड ग्रुपका व्यक्ति निकै शान्त स्वभावका हुन्छ । यिनीहरु निकै स्मार्ट र इन्टेलिजेन्ट हुन्छन् । एबी ब्लड ग्रुपका मानिसले सजिलै अरुमाथि विश्वास गर्दैनन् । यिनीहरू राम्रो र विश्वासिलो साथी बन्ने गर्छन् । यो ब्लड ग्रुप भएका व्यक्तिहरु निकै सफा हृदयका हुन्छन् । जस्तो भित्री सोच हुन्छ त्यस्तै दर्शाउने गर्छन् ।
एबी नेगेटिभ ग्रुप : समूहका मानिसहरूको दिमाग अत्यन्तै तेज हुन्छ । उनीहरू बुद्धिमान मानिन्छ । उनीहरू सहजै अरुको कुरा बुझ्न सक्छन् । उनीहरूको दिमाग ती सबै कुराहरू बुझ्न सक्छन्, जुन मानिसहरूले त्यति ख्याल गर्दैनन् । यस्ता व्यक्तिहरूलाई जरुरी परेको खण्डमा ए नेगेटिभ र ओ नेगेटिभ रगत लिन सकिन्छ ।
बी ग्रुप : टाइप बी ब्लड ग्रुप भएका मानिस जो सँग पनि चाँडै घुलमिल गर्न सक्ने क्षमताका हुन्छन् । अर्थात् यो ब्लड ग्रुप भएका मानिस निकै मिलनसार हुन्छन् । बी ब्लड ग्रुप भएका मानिस निकै मिहेनती हुन्छन् । यि व्यक्तिहरू जीवनमा सबै काम आफ्नै मिहिनेतले प्राप्त गर्न चाहन्छन् । बी ब्लड ग्रुप भएका व्यक्ति सत्य बोल्नमा विश्वास राख्छन् । साथै यिनीहरू निकै जिद्दी पनि हुन्छन्, जसले गर्दा सजिलै कसैको पनि कुरा मान्दैनन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
बी नेगेटिभ ग्रुप :रक्त समूहका मानिसहरू अलि स्वार्थी भावना भएको मानिन्छन् । उनीहरू अरुको बारेमा भन्दा आफ्नो बारेमा बढी सोच्ने गर्छन् । उनीहरूलाई अरुको सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा त्यति विश्वास मान्दैनन् । उनीहरूको दृष्टिकोण सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी भए मिल्ने गर्छ ।
ओ ग्रुप: ओ ब्लड ग्रुप भएका मानिस निकै सकारात्मक विचार र आत्मविश्वासी हुन्छन् । यिनीहरूमा एक राम्रो लिडर बन्ने गुण हुन्छ । ओ ब्लड ग्रुप भएका व्यक्ति निकै मिहिनेती पनि हुन्छन् । यिनीहरूमा सबै भन्दा बढी सफलता हासिल गर्ने क्षमता हुन्छ । साथै ओ ब्लड ग्रुपका व्यक्तिले अरुलाई खुशी राख्नमा बढी विश्वास गर्छन ।
ओ नेगेटिभ ग्रुप :ओ नेगेटिभ भएका मानिसहरू संक्र्रिण सोँच राख्ने मानिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू अरुको लागि भन्दा आफ्नो लागि बढी सोच्ने गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो भन्दा अरुको त्यति ध्यान नहुने गरेको बताइन्छ । उनीहरू नयाँ विचारलाई सहज स्वीकार्न नसक्ने प्रकृतिका हुन्छन् । ओ नेगेटिभ रक्त समूहका मानिसलाई जरुरी परेको खण्डमा ओ नेगेटिभ रगत नै लिन सक्छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
मध्यरातमा सलमानले ऐश्वर्याको घरको ढोका ठटाउँदा-ठटाउँदै हातवाट रगत बगेको थियो, यसकारण छुटेको थियो प्रेम
बिचरा ! हेर्नुस बिदेशी जस्तै देखिने यो गोरो परीवार , गोरो भएकै कारण कसैले नपाएको दुख पाए (भिडियो सहित)
स्त’न र जोर्नीको दुखाइ कम गर्छ बन्दा गोभीले, यसरी प्रयोग गर्नुहोस..
सपनामा के देखे के हुन्छ – यी हुन् ६५ सपनाका फलहरू
June 7, 2021 June 7, 2021 goodmam
जब भखरै बिहे गरेका बेहुलाले बेहुलीलाई मोटरसाइकलमा लिएर जाँदै थिए आचानक प्रहरीले रोकेर उल्टै यस्तो गरेको देखेर छक्क परे, हेर्नुहोस भाईरल भिडियो –
May 18, 2021 goodmam